Akwụkwọ ahụaja nke ọhụrụ OnePlus 6T dị ugbu a | Gam akporosis
Akwụkwọ ahụaja nke ọhụrụ OnePlus 6T dị ugbu a
Dị ka emebere ya, ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ ga-aga n'ihu ụbọchị ịgba akwụkwọ otu ụbọchị ka ọ ghara adaba omume ngosi na Apple emere n'ime awa ole na ole, ụlọ ọrụ OnePlus gosipụtara OnePlus 6T ọhụrụ, ọnụahịa nke na-enye anyị ọtụtụ mgbanwe ma e jiri ya tụnyere onye bu ya ụzọ.
Enwere ike ịtụle ihe ọhụrụ OnePlus 6T ọgbọ ọhụrụ gafere ụdị ọrụ ịgba egwu T. na-enye, ebe ọ bụ na ọ bụghị naanị na nha ihuenyo ka abawanye, kamakwa ihe mkpịsị aka mkpịsị aka ejiri n'okpuru ya, ebe ga-abụ n'oge na-adịghị anya maka ọtụtụ ngwaọrụ.
Na Androisis anyị agbadatalarị ọrụ iji gwa gị ozi niile enwere ike ịchọta na ọnụ a, na mgbakwunye na ịnye gị a ntule n'etiti OnePlus 6 na OnePlus 6T. Anyị na-eme ka dị, site n'isiokwu a, ihe niile na akwụkwọ ahụ aja nke sitere n'aka ọnụ ọhụrụ a nke mbinye aka. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ibudata ha, mgbe ahụ anyị kọwara otu esi eme ya site na ịgbaso usoro ole na ole dị mfe.
Ọzọkwa, OnePlus adabere na Hampus Olsson ilekọta chepụta na akwụkwọ ahụ aja nke ọgbọ ọhụrụ nke OnePlus. N'oge a, naanị anyị ga-enwe ọ enjoyụ akwụkwọ ahụaja atọ ọhụụ, nke dị na 2k + na 4k. Na mgbakwunye, anyị ga-ahụkwa, na nsụgharị 2k, ederede nke soro OnePlus na afọ ndị na-adịbeghị anya:
All na akwụkwọ ahụ aja dị maka nbudata na gị mbụ mkpebi, nke ga - enyere gị aka iji ha ozugbo na ngwaọrụ anyị.
Ọ bụrụ na ị bụ onye hụrụ akwụkwọ ahụ aja anya, anyị na-akwado ka ị gaa na ngalaba anyị nke Na akwụkwọ ahụ aja maka gam akporoO doro anya na ị hụrụ n'anya karịa otu 😉
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Akwụkwọ ahụaja nke ọhụrụ OnePlus 6T dị ugbu a